Izinhlelo zokuqinisa umsebenzi weCall Centre – Msunduzi News
emphakathini mayelana nohlelo lweCall Centre nolwamukela izikhalo kanye nemibuzo yomphakathi uMkhandlu usuqhamuke nendlela entsha yokusebenza. Lokhu kuvele emhlangamweni wesigungu obubanjwe mhla ……
Loyo obambe njengeMeneja kaMasipalala, uNkk uNelisiwe Ngcobo uvumile ukuthi kuke kwanokuxhuga nathe kudalwa yizimo ezahlukene. Nokho uqinise amakhansela idolo ekutheni selikhona ikhambi. Uveze ukuthi kuhlelwe nendlela yokuqopha izincingo ukuze kube lula ukulandelela. Ithimba lakhe limesekile kulesi sethulo sakhe.
Omunye obeyingxenye yethimba lezisebenzi ebezenza isethulo bekunguNkk uMadeleine Jackson noyiMeneja eHhovisini leMeneja kaMasipala nochazele umhlangano ukuthi okwamanje uhlelo olukhona lwezincingo alukwazi ukwenza umuntu alinde kusakhulunywa nomunye. Ukugcizelele ukuthi esinye sezixazululo wukuba nohlelo oluzokwazi ukuthi lwazise umuntu oshaya ucingo ukuthi ungunombolo bani, luphinde lwaziswe nesikhathi umuntu azosilinda ngaphambi kokuthi asizakale, ngoba njengamanje kwenza amakhasimende azizwe sengathi awanakiwe.
“Esikuzamayo manje wubuchwepheshe obusebenza ezindaweni ezifana nakwaSouth African Revenue Services, nobukwazi ukwazisa umuntu ukuthi uzolinda isikhathi esingakani ukuze athole usizo,” kusho uNkk uJackson.
Khona lapho wazise amalungu esigungu ukuthi kunzima ukuqagula ukuthi lokhu kuzothatha isikhathi esingakanani ukuqala ngalolu hlelo lokuhlela kabusha iCall Centre kwazise lo nyakamali usuya ngasemaphethelweni.
Okunye akuvezile wukuthi baphezu kwezinhlelo zokwandisa abasebenzi: “Njengamanje sinabasebenzi abahlanu ngeshift ngayinye, okwamanje siphezu kwezinhlelo zokwengeza ngabathathu babe yisi-8 ngeshift ngayinye ukuze umsebenzi uzokwazi ukwenzeka ngendlela,” kuphetha uNkk uJackson.
Recognition and respect: Women in leadership
Previous post: Ukulungiswa kwengqalasizinda eyimigwaqo
Next post: ‘Sonke sinelungelo lendawo ehlanzekile’